प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण तय « Bagmati Page
चैत्र १५, २०७८ मंगलबार
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण तय
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण तय भएको छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा यही चैत १८ गते भारतको तीनदिने भ्रमणमा निस्किने परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका साथ उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवा पनि रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काकासाथै अन्य वरिष्ठ मन्त्री, सचिव र अधिकारी सहभागी हुने भएका छन्। उक्त भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक, सदियौं पुरानो र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतका उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्रीले चैत १९ गते हैदरावाद हाउसमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्ने तय भएको छ। मोदीले प्रधानमन्त्री देउवा र प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवा भोजको आयोजना गर्ने तालिका बनेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग विदेशमन्त्री एस जयशंकर तथा भारत सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले शिष्टाचार भेट गर्ने भएका छन्। नयाँदिल्लीमा रहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यापारी समुदायको भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। काठमाडौं फर्किनुअघि चैत २० गते वाराणसी भ्रमण गर्ने भएका छन्।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्त रूपमा जनकपुर–जयनगर रेलको भर्चुअल उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। भारतले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न सहयोग घोषणा गर्नेलगायत तयारी पनि भइरहेको छ। नयाँ दिल्लीमा भ्रमणको तयारी गर्न भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा सक्रिय भएका छन्।
नेपाल–भारत सम्बन्धबारे जानकार कूटनीतिज्ञले नेपालले उठाउनै पर्ने मुद्दाबारे चर्चा गरेका छन्। उनीहरूले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकदेखि सुस्तासम्मको सीमा समस्या, असमान पानी वितरण र डुबानको समस्या, भारतीय लगानी, व्यापारघाटा, नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारको सहज उपलब्धतालगायत विषय छुटाउन नहुने सुझाव दिएका छन्।
देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको भारत भ्रमणका क्रममा २०७४ भदौ ८ गते दुई देशबीच आठ सम्झौता भएको थियो।